ဂစ်တာနဲ့ ဂီတ ဂစ်တာ နဲ့ ဂီတ: မျိုးကြီး - အမေ Intro & Solo
မျိုးကြီး - အမေ Intro & Solo
သီချင်းကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာယူပါ။ မျိုးကြီး - အမေ
ဘလော့ကိုလဲ ပစ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ ပို့စ်တွေရေးဖို့လဲ သိပ်စိတ်မပါဘူးဖြစ်နေတာ။ စိတ်ပါတုန်းကောက်လုပ်မိတဲ့ မျိုးကြီး တက်ပ် လေးပဲပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
အရမ်းမြန်တဲ့တစ်နေရာမှာ သီချင်းထဲက သူ့အသွားလေးကို မှန်းပြီး အီး မိုင်နာ ပန်တာတောနစ် ထဲမှာ တူအောင် လျောက်ထည့်လိုက်တာပါ။ ကိုယ်ဟာကိုလဲ တီးလို့မရပါဘူး။
မူရင်းကတော့ ရှာကီရာ ရဲ့ The One ပါ။ ဒါပေမယ့် ရှာကီရာသီချင်းဗားရှင်းနဲ့ မျိုးကြိးဗားရှင်းနဲ့က ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ခြားတီးဝိုင်းတစ်ခုခုက ပြောင်းပြီးသား ဗားရှင်းကို ပြန်ကော်ပီသလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆိုလိုကတော့ ဆရာချစ် ပုံစံလို့တော့ ထင်မိတာပဲ။
Posted by Freshup at 11:58 AM
Plase, Share your post on Google Reader.
I can't read full post on Google Reader.
And One more thig, pls, Upload your tabs to mediafire instead of 4shared.com.
ကျွန်တော် electric guiter က ကြိူးမာတော့ bend ကိုအပေါ် ၆ ကြိုး ထိဆွဲ မရပါ လက်လည်းအရမ်းနာတယ်ခင်ဗျ ကြိုး ပျော့၂ လေး အသံစွာ၂ နဲ့ bending ကောင်း၂ တီးနိုင် ဖို့ ကြိုး ညှိ နည်း လေး လမ်း ညွှန်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော် မျိုးကြီး-(အမေintro & solo) down လို့မရပါဘူး
အဆင်ပြေရင် mediafire link လေးများရှိရင် တင် ပေးပါခင်ဗျာ
4shared ကိုလဲ မသုံးတတ်လို့ပါ ၊
အကိုရေ..မျိုးကြီးရဲ့အဆိပ်ခွက်သီချင်းမူရင်းလေးကို သိချင်လို့ပါ..အကိုသိမယ်ဆိုရင် ဖြေပေးပါဦး....လေပြည် ကလဲ.. Rainbow သီချင်းဆိုတာကိုတော့ သိပါတယ်..ဒါပေမယ့်သီချင်းခေါင်းစဉ် ကိုမသိလို့ပါ..အကိုများသိရင် ဖြေပေးပါဦးဗျာ....
shoe games, where all the cards are dealt face up. The rule about [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] can be enjoyed by adults of all ages. Playing online black jack [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] rules these are, but they will help get to the blackjack table [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] vehicle, but its important to remember that your riding lawn
the juice that is definitely produced is also critical. Even [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] collision. Avoid using the car jack in steep places and always [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] quiteafew reports how the Port LaLanne juicer is very to [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] exceptional type when they buy Jack wills & Fitch goods.
simple images. They can be used to lightapath, light your yard, [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] outrun most British Empire interceptors in the films. To find [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] often do this and spendalot of money with little return. Target [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] and pleasurable. Over the years, car models continue to change